Genesisy 37: 1-36
Ary hoy ny rahalahiny taminy: Moa hanjaka aminay tokoa va hianao? na hanapaka anay tokoa va hianao? Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.
Ary hoy Isiraely tamin'i Josefa: Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Avia mba hirahiko hankany aminy hianao. Ary hoy izy taminy: Inty Aho.
Ary hoy ny rainy taminy: Masìna hianao, andeha, izahao na tsara ihany ny rahalahinao sy ny ondry aman-osy, na manao ahoana; ka miverena hilaza amiko. Dia nirahiny hiala avy teo amin'ny lohasahan'i Hebrona izy, dia nankany Sekema.
Dia hoy kosa izy: Ny rahalahiko no tadiaviko; koa masìna hianao, mba lazao amiko izay iandrasany ondry.
Ary nalain'ireo rahalahiny ilay akanjon'i Josefa, dia namono zanak'osy izy, ka natsobony tamin'ny ra ny akanjo.
Dia avy ny zanani-lahy rehetra sy ny zanani-vavy rehetra mba hampionona azy, fa tsy nety nampiononina izy, fa hoy izy; Tsia, fa hidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainan-tsi-hita aho. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy.